Maxaa ka cusub mustaqbalka Lionel Messi ee kooxda Barcelona? -
HomeciyaarahaMaxaa ka cusub mustaqbalka Lionel Messi ee kooxda Barcelona?
Maxaa ka cusub mustaqbalka Lionel Messi ee kooxda Barcelona?
November 7, 2020 F.G ciyaaraha 0
Lionel Messi ayaa dhawaanahan walaac badan ku abuuray taageerayaasha kooxda Barcelona, sababtoo ah in lala xiriirinayo ka tagista garoonka Camp Nou.
Lionel Messi ayaa raadinayay inuu ka tago Barcelona tan iyo xagaagii la soo dhaafay, Manchester City ayaa umuuqata inay tahay kooxda ugu dhow ee la saxiixan karta, maadaama uu joogo Pep Guardiola, iyo in kooxda ay xilli ciyaareed kasta ka qeyb gasho tartanka Champions League.
Haddaba sida laga soo xigtay barnaamijka “Quattro” ee dalka Spain fikrada uu kaga tagayo kooxda Barcelona ayuu wali doorbidayaa Lionel Messi, in kasta oo uu is casilay madaxweyne Josep Maria Bartomeu, isla markaana ay soo dhowdahay doorashada xilka madaxtinimo ee kooxda.
Barnaamijka “Quattro” ayaa lagu shaaciyay in wax walba ay tilmaamayaan in Lionel Messi uu ka tagayo Barcelona, ​​isla markaana uusan ka laaban doonin go’aankiisa ilaa uu ka hubsado in kooxda reer Catalonia ay heysato mashruuc isboorti oo guuleysata sanadaha soo socda.
Lionel Messi ayaa wuxuu horey carabka ugu adkeeyay in waxa uu doonayo ay tahay inuu helo mashruuc isboorti oo leh astaamo iyo aragtiyo cad, taas oo xaq u siin doonta inuu u tartamo koobabka gudaha Spain iyo kuwa yurub intaba, isla markaana ayna dib u soo noqonin wixii ku dhacay Barcelona sanadihii dambe.